Ọchịchọ, ma eleghị anya, nwanyị ọ bụla ọ bụla chọrọ iwepụ ibu arọ mgbe ememe ahụ gasịrị. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ọnụ ọgụgụ, na nkezi anyị na-enweta izu abụọ izu ike site na abụọ na ise kilogram nke arọ. N'ezie, ọ bụ ihe dị mma na onye ọ bụla chọrọ ka ahụ jụụ, izu ike site na nrụgide na ibubiga ókè, ma rie ọtụtụ goodies. Ihe a nile dị mma, ma na-eguzo na akpịrịkpa mgbe izu ole na ole gasịrị, anyị na-enweta ọnyà ọhụrụ, site na nọmba na scales ndị a!
Kedu ihe kwesịrị ịbụ nri mgbe ememe ahụ gasịrị?
Ikwesighi igabiga oke, "nodu ala" na nri siri ike mgbe o richara nri, na ihe aga eme mgbe ememe oriri ahu na uzo esi adighi ibu , g'eduzi ndi nwere ezi ihe. Ha na-enye ndụmọdụ ka ha ghara ịrịa agụụ, kama iji jikọta nri kwesịrị ekwesị na ọzụzụ ọzụzụ ahụike wee sụgharịa kilogram ndị "festive" agaghị enwe. Ibudata mgbe ememe ahụ gasịrị, ahụ dị mkpa, n'ihi na ọ nabatara ọtụtụ oriri na nnukwu calorie.
Ndị a bụ iwu ndị bụ isi mgbe e risịrị nri nri:
nri mgbe ezumike kwesịrị ịdị mma, ị ga-echefu banyere abụba sauces, Mayonezi, ngwaahịa mkpọ, marinades, ngwaahịa na-ese siga;
maka ime ka ahụ dị ọcha chọrọ mmiri dị ọcha, nye ya ya, na lita lita abụọ kwa ụbọchị;
Rie ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ṅụọ ihe ọṅụṅụ na-aṅụ mmiri ara ehi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji kefir na abụba abụba na eke yoghurt;
akụkụ nile kwesiri ịdị umeala n'obi, ọkacha mma ise ugboro isii n'ụbọchị;
A ga-ewepu sweets si nri, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ibi ndụ na-enweghị ụtọ, rie mmanụ aṅụ, marshmallows, marmalade, mkpụrụ osisi mịrị amị ma ọ bụ mkpụrụ osisi candied.
Kedu ka ị ga-esi tụfuo mgbe ememe ahụ gasịrị site n'enyemaka nke ọgwụgwọ "ujo"?
Ọ bụrụ na ọ dị nro, ụda dị arọ adịghị adabara gị, ị nwere ike itinye usoro nke ndị na-edozi ahụ na-akwado. Ha na-enye nri "ujo," nke ị nwere ike wepu ihe dị ka kilogram atọ n'izu, na enweghị nnukwu nsogbu na nhụjuanya. Nanị ọnọdụ nke usoro a bụ: ọ dị mkpa 'ịnọdụ ala' na nri ozugbo ememe ahụ gasịrị! Ogologo oge ị na-atụfu, ọ ga-esiwanye ike ịchụpụ abụba abụba, n'ihi na ọ ga-enwe oge iji tinye aka "dozie" na ebe nsogbu.
"Nri" nri anaghị adabara ndị nwere nsogbu na afo, obi, endocrine usoro, akụrụ, arịa ọbara. Ọ nwere ike iji ya na ndị ahụ ike. Usoro a dị iche site na ụzọ ndị ọzọ site na mmuta - ọ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ dị mfe, na ahụ - ahụike.
Ihe di njikere maka ubochi nke izu bu otua:
Monday: ọ dị ọhụrụ site na oranges tinyere ụyọkọ atọ nke steamed muesli ke usenubọk, bred yogurt maka nri ụtụtụ nke abụọ, achịcha na-ekoghị eko, 180 g nke azụ azụ na 150 g nke ụyọkọ nri maka nri ehihie, otu apụl maka nri ụtụtụ na akwa na 80 g nke macaroni na mgbede.
Tuesday: achicha na-ekoghị eko na kranberị n'ụtụtụ, ube dị ka nri, salad kabeeji, elu na tomato na oberibe achicha na chiiz n'ehihie, yogọt maka nri ụtụtụ na 80 g nke spaghetti na salad na mgbede.
Wednesday: kefir na achicha ojii n'ụtụtụ, abụọ kiwi maka nri nri, 200 g azụ na akwụkwọ nri maka nri ehihie, mmanya mmanya na mkpụrụ mmiri maka nri, osikapa 70 gram na gram 100 nke akwụkwọ nri na mgbede.
Tọzdee: tost, apple and herbal tea na ụtụtụ, yogọt maka nri, 100 g nke oporo na 200 g nke carrots sie ya na agwa maka nri ehihie, mgbe ahụ - apụl, na nri abalị - 50 g nke pasta na akwụkwọ nri na cheese.
Fraịde: otu iko mmiri ara ehi na buckwheat maka nri ụtụtụ, otu ube maka nri, gram 150 na salad na akwa nwere achịcha n'ehihie, yogọt maka etiti abalị, maka nri abalị - osikapa 50 grams, squid sie, 150 grams grarots grated, gram 40 grams.
Saturday : karọọ puree, otu chiiz cheese, bisikiiki n'ụtụtụ, mkpụrụ mmanya dị egwu dịka nri, ọkụkọ na tomato na ehihie, osikapa na mushrooms (grams 50) na mgbede.
Sunday: na ụtụtụ - tii tii na oroma, obere cheese na-enweghị abụba ntakịrị ka oge na-aga, ofe akwukwo nri n'ehihie, osikapa ma sie akwa na mgbede.
Ugbu a, ị maara otú ị ga-esi tụfuo mgbe ememe ndị ahụ gasịrị site n'enyemaka nke "nri" ụzụ. Ọ na-adọrọ mmasị ọ bụghị nanị maka ịdị irè ya, kamakwa maka eziokwu ahụ na a pụrụ iji ya mee ntọala maka nri kwesịrị ekwesị.
Egwuregwu Erobics Slimming na Home
Ịkwadebe nke chromium maka ụkọ ọnwụ
Na-aṅụ si na ginger maka ọnwụ
Ntuchi maka akwalata ma na-eme sporotom - ụdị kachasị dị irè
Esi ewelata ịnyịnya ibu?
Cedar mmanụ maka ụkọ ọnwụ
Usoro maka akwalata na salons
Breeches maka ọnwụ ọnwụ
Ebe oke ibu
Holosas maka ibulata
Rite maka ọnwụ
Megan Markle na Kate Middleton na-aghọ akụkụ nke "omenala ebe obibi" site na ... emoji!
Onyeisi ndị mmụọ ozi Michael - ihe na-enyere aka, ekpere Orthodox ka onyeisi ndị mmụọ ozi Michael
Azụ na Ụgha
Ihe ndekọ nke Brooke Shields
Gini mere ogwu ji enwe onye di iche?
Mara mma okpomọkụ sarafans
Cataract na nkịta
Osisi Krismas nke eri
Drew Barrymore weghaara ihe oyiyi mara mma nke "obere Drew" maka InStyle
Esi esi mee bred na akwukwo akwukwo?
25 ihe mere ị ga-eji bịa Birmingham
Esi emeso dysbiosis?
Uwe isi na curls maka ogologo ntutu isi
Ogige ndị inyom na-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ - ihe osise 40 na-ewu ewu nke ụmụ agbọghọ nọ na akpa akwa ogige